Sida loo sameeyo shaandhooyinka Instagram sida ugu fudud | Androidsis
Nerea Pereira | 05/09/2021 17:00 | La cusbooneysiiyay 06/09/2021 11:34 | Codsiyada Android, Tababarada
Si aad uga dhex muuqato barta Instagram, waxaa muhiim ah inaad si taxaddar leh u daryeesho waxyaabaha aad daabacdo oo aad ka duwanaato isticmaaleyaasha kale ee internetka. Tan waxaa loo samayn karaa dhowr siyaabood laakiin mid ka mid ah ayaa ah in la ilaaliyo midnimada bilicsanaanta si ay u noqoto hab dadka raacsan u aqoonsadaan nooca daabacaadaha aad soo geliso. Waxaadna ku samayn kartaa tan adoo abuuraya oo ku dabaqaya presets -ka sawirada yaqaana sida loo sameeyo shaandhooyinka barta Instagram.
Waxyaabahan waxaa loo yaqaan: presets, luts, presets, filters, iwm. Laakiin guud ahaan waa hagaajin lagu dabaqo sawirradaada si loo beddelo muuqaalkooda. Tan waxaad ku faani kartaa inaad taabasho ka duwan siiso farriimahaaga. Marka, aan aragno tillaabooyinka la raacayo si aan u ogaano sida loo sameeyo shaandhooyinka barta Instagram sida ugu fudud.
1 Presets -ka: sirta ah in la ogaado sida loo sameeyo shaandhooyinka barta Instagram
2 U samee u -dhiggaaga gaarka ah ee Instagram
3 Sida loo soo dejiyo jadwalka bilaashka ah ee Lightroom
Presets -ka: sirta ah in la ogaado sida loo sameeyo shaandhooyinka barta Instagram
Qaar baa sameeya gabi ahaanba beddesho sawirka halka kuwa kale ay muujin karaan kaliya midab gaar ah. Isku -darka hawlaha uu hore u qaban karo waa tirada hababka tafatirka ee jira. Tusaalaha ugu caansan ee daabacaadda noocaan ah waa "Orange & Tell" halkaas oo ay ka muuqdaan hooska diirran ee oranji iyo hooska qabow ee turquoise.
Tani waxay keentaa isku -darka u dhexeeya kala -duwanaanshaha cabbirrada sawirrada kala duwan sida soo -gaadhista, isbarbar -dhigga, caddeynta ama xakamaynta HSL. Waxaa jira codsiyo badan oo la heli karo si loogu dabaqo hababkaan taleefanka. Qaarkood waxay horeba caan ugu yihiin natiijooyinka wanaagsan ee ay bixiyaan sida VSCO, Snapseed, Afterlight iyo qaar kaloo badan. Laakiin kan ugu caansan dhammaantood waa shaki la'aan Lightroom.
Lightroom waa codsi suite ah oo ay si weyn u isticmaalaan xirfadlayaasha Adobe taas oo u oggolaanaysa adeegsadaha inuu abuuro oo adeegsado “shaandheeyayaasha”. Markaa hadda waxaan u tagnaa inaan aragno waxaan ku samayn karno Lightroom oo leh nooca bilaashka ah. Sida laga yaabo inaad aragtay, waxaad haysataa codsiyo kala duwan oo aad ku abuuri karto shaandhooyinka Instagram ee caadada u ah. Sidan, waxaad yeelan doontaa kaliya inaad ogaato faahfaahin yar oo ku saabsan xulashooyinka kala duwan ee aad ku leedahay farahaaga.
U samee u -dhiggaaga gaarka ah ee Instagram
Habka tafatirka waa mid aad u fudud oo waxa ugu fiican oo dhan waa inaad ka abuuri karto kombiyuutarka iyada oo loo marayo nooca desktop -ka iyo sidoo kale nooca mobilada. Dabcan, waxaan si fiican kuugu hagaynaa adiga oo sharxaya wax kasta oo ay tahay inaad sameyso si aad u isticmaasho Lightroom si aad ugu abuurto shaandhooyinkaaga Instagram. Si aad howshan ugu fuliso moobilkaaga, waa inaad raacdaa tallaabooyinka soo socda:
Xulo sawirka aad rabto inaad tafatirto oo u dir Lightroom. Waxaad awoodi doontaa inaad tan ka dhex samayso galalka aaladda laakiin sidoo kale ku jira menu -ka dalabka ee sumadda “+”.
Markaad soo geliso sawirka app -ka, hadda waa waqtigii aad tafatiri lahayd sawirka, waxaadna samayn kartaa wax kasta oo muuqda oo soo jiidanaya dareenka.
Markaad dhammaystirto tafatirka sawirka, hadda waa inaad ku keydisaa jadwalka hore ee Lightroom. Si aad tan u samayso, guji liistada saddexda dhibcood ee baarka kore ka dibna dooro "Abuur preset".
Liiskan dhexdiisa waa inaad doorataa beero aad beddeshay iyo haddii aad rabto inay muuqato marka lutka lagu dabaqo sawir kale. Waxaad samayn kartaa koox si aad si dhaqso leh u aqoonsato midka uu yahay.
Iyo voila, adoo raacaya tillaabooyinkan waxaad mar hore u abuuri lahayd shaandho dhammaan sawirradaada. Marka la sameeyo, ku -dhejinta sawirka waa mid aad u fudud:
Ka dooro sawir menu Lightroom oo fur.
Fiiri menu -ka ku yaal baarka hoose ee ikhtiyaarka "preset".
Gudaha waxaad ka arki kartaa dhammaan dejinta aad ku leedahay ururinta dhexdeeda. Haddii aad rabto inaad codsato, waa inaad gujisaa midkood oo aad aqbashaa isbeddelada.
Si aad tan uga samayso kombiyuutarka waxaad u baahan tahay uun inaad hesho daqiiqadda tafatirka sawirka barnaamijka. Mar haddii aad halkaan joogto waa inaad gujisaa "+" oo ku xigta xulashooyinka hore loo soo dhigay ee ka muuqda dhinaca bidix. Markaad samayso markaa waxaad hore u kaydin doontaa shaandhooyinka aad ku dabaqi karto sawirradaada hal guji. Kadib waxaad dib u hagaajin kartaa walxaha kala duwan iyo nalalka si aad ugu hagaajiso sawirka shaandhada aad codsatay.
Sida loo soo dejiyo jadwalka bilaashka ah ee Lightroom
Lightroom waa dalabka inta badan adeegsadayaashu, sidaa darteed kumanaan isticmaale ayaa abuuraya shaandhooyin waxayna geliyaan internetka si dadka kale u isticmaalaan. Isticmaalayaal kale oo badan ayaa ku ganacsada shaandhooyinka ay abuuraan. Raadinta Internetka ee shaandhaynta Lightroom waxaad arki doontaa in liis aad u tiro badan oo natiijooyin ah soo baxaan. Shabakadaha, goleyaasha iyo fiidyowyada YouTube -ka halkaas oo isticmaaleyaal badani ku siiyaan shaandhooyinkooda lacag la'aan. Qaar ka mid ah bogagga shabakadda ee aad ka heli karto ikhtiyaarrada waa: Crehana, Adobe Exchange ama Jaceylka Hore loo helo iyo kuwo kale oo badan.
Laakiin Markaad raadineyso shaandheeyeyaal, waa inaad maskaxda ku haysaa inay ku kala duwan yihiin luts for Lightroom Classic (nooca desktop) ama Lightroom Mobile (taleefanka). Midda hore waa feyl leh fiditaan .xtml, kaas oo kuu oggolaanaya inaad ka soo rarto isla menu -ka soo dejinta hore, halka nooca moobiilka uu lahaan doono kordhin dooro hore.
Laakiin haddii aadan rabin inaad u isticmaasho Lightroom si aad sheeko ugu geliso astaantaada Instagram, xusuusnow in arjiga horeba ay ku jiraan shaandheeyaasheeda. Kuwani sidoo kale waxay u shaqeeyaan sidii caleemo oo aad ku dari karto sawirradaada qaybta gaarka ah tan, in kasta oo maanka ku hayo inaadan xakamayn karin halbeeg kasta oo dhalaalaya, iftiin, isbarbardhig, iwm.
Iyada oo leh dhammaan macluumaadkaan ku saabsan jadwalka hore, waxaad ku bilaabi kartaa adeegsiga si aad u muujiso sawirradaada Instagram. Qaybtani waxay kuu oggolaaneysaa inaad abuurto dhowr siyaabood oo aad shaqsiyeyntaada ugu dhex gasho internetka. Sidoo kale waa ikhtiyaar wanaagsan inaad ka qaadatid dhiirrigelin sawirro kale si aad u abuurto presets-ka indhaha soo jiidan kara oo aad u soo jiita dareenkaaga. IYO Had iyo jeer maskaxda ku hay in haddii aad rabto isticmaaleyaasha kale inay aqoonsadaan dadaalka daabacaadahaaga, ha koobin oo ha ku dhiirrigeliyo kuwa kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo sameeyo shaandhaynta Instagram psao talaabo